Io ketraka zazavavy milaza zavatra izay zara raha misy olona mety ho sahy hanao amin'ny HuffPost Italia - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Io ketraka zazavavy milaza zavatra izay zara raha misy olona mety ho sahy hanao amin'ny HuffPost Italia
Ny tahotra ny manambara ny fihetseham-po lehibe loatra
Na dia olona an-tapitrisany manerana izao tontolo izao, ao anatin'izany ny fijaliany, ketraka, dia mbola fady ny miresaka foto-kevitraTsy misy olona an-tsitrapo miaiky fa izy mijaly noho ny aretin-tsaina. Ny fahitana ny fahalemena. Ity dia olana manokana eto amin'izao tontolo izao ny asa, satria ketraka loatra matetika mifandray amin'ny mampisafotofoto ny tsy fahaizana.
Tiako ianao aoka aho miala tsiny)
Izany rehetra sahy kokoa ny olona rehefa miresaka momba ny zavatra tena mankaleo rehetra fahadiovam-po. Ny taona izay dia nahazo miles dia mbola dingana iray mialoha azy. Izy dia nahazo ny tenany ho tattoo fa farany nanokatra ny diniky ny varavarankely. Eo ankaviany tongony ankehitriny ny teny izay afaka mamaky tsara. Ireo no teny niteny imbetsaka tamin'ny ketraka ny olona, na dia ny tena marina tsy misy lainga. Noho izany, dia manana tombokavatsa ny Snipe, ny faharoa sarobidy. Satria avy ny fomba fijery, ny teny avy amin'ny"afa-mA"(mamonjy ahy). Hazavao taminy:"Raha ny hafa kosa mahita izany, fa avy amin'ny fomba fijery tsy MANINONA ny mamaky azy io."Ho ahy, izany dia midika fa ny olon-drehetra toa mahita izany olona izany, tsy MANINONA, saingy tsy tena tsara. Tsarovy fa ny olona izay te hanao zavatra dia afaka ihany koa ho hita eo ny tolona amin'ny tenany. Ny Taona nandefa sary ny tombokavatsa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ho an'ny Facebook tamin'ity fahavaratra ity, sady nanoratra hoe: (Ry neny, ry dada, aza maka ahy ianao, satria ity fanapahan-kevitra. Androany aho dia te hiresaka momba ny zavatra izay vitsy aminareo no mahalala. Vonona aho mba hiresaka momba ny aretin-tsaina. Ny tamin'ny taon-dasa dia efa nisy ny fikambanana avy ny fahaketrahana. Ary amim-pahatsorana, mino aho fa izany no ela lasa izay mialoha izany dia lasa olana, fa heveriko fa tsy hahazo na inona na inona ratsy sy ny ratsy mandra tsy miasa intsony. Izany no mahatonga ahy hametraka amin'ny tattoo stitch amin'izao fotoana izao. Nahatsapa aho fa ny tongotra ao ambadika ao no toerana tsara indrindra ho an'ny dikany. Rehefa ny hafa kosa mahita izany, fa avy ny fomba fijery izany dia tsy mba hamaky. Ho ahy, midika izany fa ho an'ny hafa rehetra, io olona io dia toa mandeha tsara, nefa tsy tena mandeha tsara. Tsarovy fa ny olona izay te-hanao zavatra, na dia amin'ny ady amin'ny tenany, dia afaka ny ho tonga. Kivy dia asa izay tsy mbola vita, satria fotsiny hoe tsy mahatsiaro ho afaka ny hanao izany. Ketraka ny alina rehefa mitomany aho satria tsapako ho ketraka, na dia rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra. Kivy dia tsy tokony ho varimbariana (avy amin'ny haino aman-jery, lalao video, filma, TELE, na dia be ny asa), satria ianao manana be dia be ny fotoana miasa. Manana eritreritra tsy mihoatra ny telo minitra fa afaka matoky aho. Kivy dia ny ranomasoko, satria tsy fantatro hoe nahoana aho no mahatsiaro ho tsy misy ilana azy intsony, rehefa fantatro fa aho tena sambatra. Dia tena sarotra ny hiresaka momba izany ampahibemaso, satria dia tena sarotra ho ahy mba hahatsapa marefo.
saingy izany no zava-dehibe mba hiresaka momba izany.
Aretin-tsaina dia ny zavatra lehibe, fa eo amin'ny fiaraha-monina izany no mahamenatra. Ny ara-batana, ara-pahasalamana dia tena zava-dehibe ho antsika, fa isika no handoa ny kely saina ho amin'ny toe-tsaina. Ary izany no tena tanteraka atao. Aretin-tsaina dia tsy vahaolana, ary mety ho na inona na inona, amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainana. Ary izany no fanontaniana manan-danja, satria isika dia miresaka momba ny zavatra tsy azonao atao.
Noho izany dia soraty eo amin'ny tattoo stitch.
Izany no fomba tsara hanombohana ny resaka.
Izany hery ahy mba hanao ny Tolona ho an'ny zo hiteny, ary noho ny fanentanana no zava-dehibe. Ho gaga ianao mahita ny fomba maro ny olona tsy mahalala dia miady amin'ny fahakiviana, fanahiana, na ny aretin-tsaina. Izaho ihany no toy ny olona iray, fa izy no ho afaka hamonjy ny hafa. Tsy afaka mangataka kokoa noho izany. Angamba izany no mahatonga aho ho liana amin'ny"psychology"ho toa ahy. Tiako ny manampy ny olona hahatsapa ny zavatra nataoko - ary mbola atao, satria ny helo. Ary tiako ianareo mba tsy ho. Mieritreritra bebe kokoa aho fa ny olona foana hiezaka ny tsara indrindra mba hahatonga ny olona ho faly, satria fantany fa ny tena dikany mba hahatsapa toy izany, ary tsy mila na iza na iza mahatsapa toy izany. Misaotra anareo rehetra izay nanampy ahy tamin'ny ady ity.
Aho tsy ho aiza izao aho raha tsy ho anao.
Ny olona nizara ny lahatsoratra tao amin'ny Facebook, ny fampirantiana, tahaka ireo maro hafa, dia misokatra kokoa ny lohahevitra ny adihevitra mikasika ny lohahevitra fanontaniana.
Izahay tsy maintsy misaotra azy noho ny herim-po.
Ny Huffington Post no sehatra fifanakalozan-kevitra ho an'ny rehetra ny fomba fijery.
Na ny adi-hevitra ara-politika na ara-tsosialy, dia hahazo ny zava-dehibe indrindra lahatsoratra sy lahatsoratra blaogy nanoratra e-mail amiko isan'andro.
Gazety, manokana votoaty sy ny dokam-barotra. Hianatra bebe kokoa momba ny.
Zazavavy tia manaiky, tsy misy harona mba hahazo Lahatsary Mampiaraka USA
Datare Fata De Video Chat - Descărcare
Mampiaraka toerana amin'ny chat roulette maimaim-poana aoka isika hahafantatra tranonkala ny lahatsary Mampiaraka online mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana fampidirana sary maimaim-poana web chat roulette video Fiarahana tamin'ny tovovavy manerana izao tontolo izao mitady ny olona iray ho an'ny fifandraisana matotra Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana